भारतले सेप्टेम्बर २८ मा ११ लाख ४२ हजार ८ सय ११ जनाको पीसीआर परीक्षण गरेको थियो। त्यसमा ७० हजार ५ सय ८९ जनामा पोजिटिभ पाइयो। यो ६.१७ प्रतिशत हो।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर अत्यासलाग्दो भइनसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘इटालीलगायत कतिपय मुलुकमा मृत्यु हुनेलाई ट्रकमा हालेर लगेको देखिन्थ्यो। नेपालको अवस्थाभारतले सेप्टेम्बर २८ मा ११ लाख ४२ हजार ८ सय ११ जनाको पीसीआर परीक्षण गरेको थियो। त्यसमा ७० हजार ५ सय ८९ जनामा पोजिटिभ पाइयो। यो ६.१७ प्रतिशत हो।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्युदर अत्यासलाग्दो भइनसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘इटालीलगायत कतिपय मुलुकमा मृत्यु हुनेलाई ट्रकमा हालेर लगेको देखिन्थ्यो। नेपालको अवस्था त्यति नराम्रो होइन।’
जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा नेपालमा संक्रमण दर बढिरहेको बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल तीनै तहका सरकारले सुशासन कायम गर्न नसक्दा कोरोना संक्रमण दर बढिरहेको ठान्छन्। त्यति नराम्रो होइन।’
जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्दा नेपालमा संक्रमण दर बढिरहेको बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल तीनै तहका सरकारले सुशासन कायम गर्न नसक्दा कोरोना संक्रमण दर बढिरहेको ठान्छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा दिनेश गौतमले खबर लेखेका छन् ।